Ny Herinandro Tao Bahrain. (10/03/06) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 17:10 GMT
Mbola herinandro tery be ho an'ny mpitoraka blaogy tao Bahrain ihany koa iny satria nikarakara ny fampiantranoana ny hetsika lehibe teo amin'ny tetiandrony ny firenena, ilay Bahrain Grand Prix!
Efa nisy sahady mpitoraka blaogy iray nanorina trano fivarotana tao amin'ny Bahrain International Circuit ary nanomboka nizara ny sariny mamirapiratra teo amin'ny tontolom-bolongana!
Sady tsy vitan'ny hoe nanintona ny jery iraisam-pirenena ho any amin'ilay firenena fotsiny ilay hetsika, fa koa nitondra vondrona maroloko-nà Belza mpitoraka blaogy, izay nihaona tamin'ireo Bahraini mitovy aminy tamin'ny sakafo hariva, narahina fialàna hetaheta sy fialamboly mba hametrahana fifandraisana akaikikaiky kokoa teo amin'ny samy olontsotra mpanao gazety. Lasa izao!
Tsy izany irery ihany anefa. Raha toa ka niasa nandritra ny 24 ora ny olona mba hahombiazan'ilay hetsika F1, niasa tamin'ny fanokafana kosa ny hafa, miantso famoriana vahoaka maromaro kokoa sy fihetsiketsehana mba hitondrana ny olana eo an-toerana ho eo ambanin'ny mason'ny iraisam-pirenena. Toy ny mahazatra, teo amin'ny lohalaharana i Chanad , niezaka ny nampiaraka ny tsiroaroa ary nitatitra tamintsika ny zava-niseho avy any ifotony
Tsy nandeha am-pahanginana ihany koa ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena Ho An'ny Vehivavy tao Bahrain, izay nanambaran'ny mpitondra fivavahana shiita ny tsy fahazoany aina noho ny Lalàna Manokana mananontanona, izay handamina amin'ny farany ny lalàna mikasika ny fianakaviana.
Mihoatra noho ny feo mikasika izany i Mahmood Al Yousif, niato fotoana fohy tamin'ny fikopakopahana Jihad amin'ireo mpitondra fivavahana.
Nanampy volomborona hafa tamin'ny satrony ihany koa ny mpitoraka blaogy Haitham Sabbah, taorian'ilay nahombiazany tamin'ny fitantanana mba hampiditra an'i Palestina ho ao amin'ny Blogger, Yahoo sy MSN. Nanintona ny saintsika tamina adihevitra hafa nitranga tao Holland ihany koa izy, izay mety handia ny làlan'ilay kisarisary danoà maharikoriko raha toa ka tsy voamarina.
Lavitra ny politika sy ny aretin'andohany, manome antsika fijery tsy dia fahita firy amin'ny fiainany feno fihetsiketsehana i Abu Hesham, Bahraini mpandidy monina ao Alaska, US. Efa ampihorohoroan'ny ”serfa” iray, nahatsikaritra voromahery matanjaka ary tafavoaka velona taminà poizina holatra mamono izay toa naniry tamin'ny fomba feno mistery tao an-tokotaniny sahady izy! Raha tsy izay daholo izy rehetra, mbola nohantsiana noho ny tsy fahampian'ny fahalalany mikasika ny rongony ihany koa izy.
Mandritra izany, tokony mbola nijery ny Oscars i Tooners raha toa ka nijaly noho ny alina tsy natoriana taorian'ny nijereny sarimihetsika iray i Nomadic Ruminations! Tsy izy ireo irery anefa ihany no tafalatsaka lalina tao anatin'izany kolontsaina izany satria i Ali Al Saeed dia mankafy ihany koa ireo hetsika tazonina ho toy ny ampahany amin'ilay fetibe Lohataonan'ny Kolontsaina ao Bahrain.
24 ora izayAmerika Avaratra